I-Guzeripl (i-Adygea) iyindawo encane ehlala endaweni yaseCaucasian. Yini eyenza ithandwa kakhulu ngabakhenti? Yiziphi izinto Guzariply ezifanele ukuvakashela? Sizophendula le mibuzo ngokuqhubekayo.
Adygea: Umzana waseGuzeripl
I-Guzeripl yindawo encane yeRiphabhlikhi yase-Adygea. Iyingxenye yeRussia, nxazonke zizungezwe i-Krasnodar Territory. Isimo sezulu lapha sinomnene, siyamnandi, futhi imvelo icebile emahlathini nasemifula (i-Adygea crosss mayelana nemifula engu-5 000).
I-Guzeripl itholakala esifundeni saseMaikop se-republic, eMfuleni iBelaya. Esiseduzane nomzana yiNtaba yaseCaucasian. I-Guerrill ibhajwe yizintaba, ngakho-ke isimo sezulu esihle sakhiwe lapha.
Umzana uncane, unabantu abangaphezu kwekhulu. Kodwa umoya ohlanzekile wezintaba, amahlathi e-coniferous kanye nemifula eshisayo iheha abavakashi abaningi abaqaphela ukukhangiswa kwemvelo kaGueripel. Kulezi zindawo ziza ngcono futhi uhlale uwedwa nawe kanye nemvelo, uphumule emadolobheni anomsindo futhi ungapheli isikhathi eside.
Ukubheka Guzerlis: Glade Partisan
Kwakukhona uGuzeripl ngo-1924 njengendawo yokukhokhela abakwa-loggers. La makamu amabili ahlala neziboshwa ezazibandakanya ukungena. Phakathi nempi, amakamu okugqekeza ayevaliwe, futhi ekupheleni kwempi, i-All-Union Tourist Route yavulwa esuka eGuzerlip. Waphela endaweni yokukhosela "Fisht".
Umzila weSoviet okwamanje uyathandwa. Indlela eya eNtabeni i-Fisht iholela ngeGlade lePartisan , eliseduze nomfula weLwandle LwaseLwandle. Ukuphakama ngaphezu kwezinga lolwandle lapha kunamamitha angu-1500.
Indlunkulu eyayiyingxenye yokuqothula yayiseminyakeni yeMpi Yombango. Empi Ye-Great Patriotic, ama-Adyghe guerrillas aqhubeka nalesi siko. Eceleni nendawo echazwe yi-ski resort. Kwabagibeli, i-Glade yePartisan iyindawo ephakathi kokunyuka ezintabeni zase-Oshten, Fisht, Psheho-Su naseGuzeripel Pass.
Ezingxenyeni zombili zomfula iBelaya kukhona ama dolman - izakhiwo zenkolo - zifakazela ukuthi ukuphila kulezi zinsuku kwakunezinkulungwane zeminyaka edlule. Ngaphambi kokungcwaba komgwaqo kuyisitimela esidala, esinenani lomlando. Yakhiwa ukuletha ihlumela emfuleni, ubude bayo buyizingalo ezintathu, amanye amaferesi ayencibilika emanzini.
E-Museum Museum yaseCaucasia ungafunda kabanzi ngezilwane nezitshalo zomhlaba endaweni evikelekile. I-museum ineminyaka engaphezu kwengu-60. Nazi izilwane ezifakiwe, izithombe, kanye nezethulo ezitshela indaba yesisekelo sendawo.
Zonke ezinye izimpawu zeGuzariplia zinemvelo yemvelo. Esigodini soMfula iBelaya kunamaphuzu ambalwa, okuvela kuwo umbono omuhle kakhulu. Kusukela kwi-platform encane yokubuka e-Black Rock ungayithanda ingxenye engasempumalanga yeGuzeriple. Kusuka lapha eduze nomzila ungathola i-Great Observation platform, lapho izingxenye eziseningizimu nephakathi ezisemakhaya zingabonakala ngokucacile. Umbono olinganayo ovelele wezwe lemvelo uvula kusukela emthambekeni weNtaba iPhilimonov.
Ekuqaleni kukaMe eGueripel ukuhlela imincintiswano "Inter-White" kubalandeli bemisebenzi yangaphandle. Lapha ama-alloys ayenziwa emagqumeni, agibela ama-kayaks nama-canoes, ama-descents emfuleni ama-catamarans. Ngesikhathi esifanayo, umkhosi wengoma yomlobi "Pervotsvet" uyenzeka kwiGlade lePartisan.
Isudi okuvikela imikhaza